Morondava sy Maintirano : Mirongatra ny trafikana solika an-dranomasina -
AccueilRaharaham-pirenenaMorondava sy Maintirano : Mirongatra ny trafikana solika an-dranomasina
Mitady hahazo vahana ny fitrandrahana solika an-dranomasina tsy ara-dalàna eny amin’ny fari-dranomasin’i Morondava sy Maintirano. Araka ny vaovao azo tamin’ny tale jeneralin’ny CFIM (Centre de fusion des informations Maritime), omaly, efa nanomboka ny volana mey teo no nisian’io tranga io teny an-toerana ary efa tambazotra mihitsy ireo manao izany. “Ahiahy amin’ny mety ho fisian’ny olona mitrandraka solika an-tsokosoko ny ranomasin’i Madagasikara no misy satria sambo lehibe mpitatitra solika hitanay amin’ny alalan’ny satelita mamatsy sambon’ny mpanjono miisa 2 eny an-dranomasina eny. Marihina fa tsy hita eny ifotony izy io fa amin’ny alalan’io satelita io ihany. Ary raha ny hita hatrany, sambo avy any Golfe Persique izy io saingy tsy voafaritra ny fatran’ny solika azon’izy ireo. Efa tambazotra matanjaka sy firaisana tsikombakomba eo amin’ny sambo mpitatitra solika sy sambon’ny mpanjono izy ity”, hoy ny Capitaine Frégate Randrianantenaina Jean Edmond, tale jeneralin’ny CFIM. Ankoatra ny fitiliana ny eny an-dranomasina, tsara ho marihina fa manangom-baovao sy manampy amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra ny anjara toeran’ny CFIM eto amin’ny firenena. Manoloana izay indrindra, efa natolotry ny CFIM ny tompon’andraikitra mahefa eny amin’ny fadintseranana avokoa ny vaovao rehetra mahakasika ity fitaterana ny solika an-dranomasin’i Madagasikara ity ary tsy mijanona hatreo fa mitohy ny fanaraha-maso ataon’ny sampandraharaha misahana ny fari-dranomasin’i Madagasikara. Voalaza fa miandry ny hetsika ataon’ity sambo lehibe ity amin’ny manaraka vao miditra an-tsehatra ny fadintseranana satria andraikiny feno ny fisahanana io tranga io.
Isan’ny mampirongatra ny fitrandrahana sy ny fitaterana solika an-dranomasina tsy ara-dalàna eto Madagasikara ity araka ny fantatra, ny tsy fanaovana fanambarana eny amin’ny fadin-tseranana noho ny fahalainana handoa hetra, hany ka eny an-dranomasina eny no mamatsy ireo sambo kely ireo sambo lehibe fa tsy miseho seranan-tsambo. Tsara ho fantatra fa manana tahirin- tsolika any amin’ny 10,8 miliara barika sy barikana entona any amin’ny 5 miliara any ny ranomasin’i Madagasikara, izay eo amin’ny fitantanan’ny ZEE (Zone économique exclusive) ary eo ambanin’ny fahefan’i Madagasikara, araka ny loharanom-baovao avy amin’ny CEDS. Araka ny vaovao azo hatrany, hahafahana manarina ny harin-karen’i Madagasikara tanteraka io solika io raha trandrahana. Ary torak’izany ihany koa ity entona eny an-dranomasina ity satria afaka ataontsika tsara ny manondrana entona raha mitady fitaovana hitrandrahana izany. Saingy mbola olana ny tsy fananana fitaovana hatreto ka lasa amidy amin’ny vahiny ny vokatra, izay izy ireo no mitrandraka azy ary isika indray avy eo no voatery mividy izany any aminy rehefa voahodina.